1974 ခုနှစ်ကတည်းက 20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer ( "ဦး-ပုံသွင်းထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း) High-အရည်အသွေး One-Stop ထုတ်လုပ်ခြင်း - CIC
20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer ( "ဦး-ပုံသွင်းထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း)
Home ထုတ်ကုန်များ လက်ရှိ Transformers အလတ်စား-ဗို့အားလက်ရှိ Transformers (10 ~ 25 ကေဗွီ)
20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer ( "ဦး-ပုံသွင်းထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း) - CIC
CIC | CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD. 1974 ကတည်းက 20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer ( "ဦး-ပုံသွင်းထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း) ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ CIC ဒါ့အပြင်ပေးအပ်သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေစသည်တို့ကိုတူရိယာထရန်စဖော်မာ, ဖြန့်ဖြူးထရန်စဖော်မာ, detuned ဓာတ်ပေါင်းဖို, epoxy insulator တွင်လည်း, အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာများထုတ်လုပ်အထူးပြုနဲ့အခြားလျှပ်စစ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ယန္တရား၏ကျယ်ပြန့ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး≦ 24kV ပါဝါစနစ် 2-core ကို epoxy-ချပစ်လက်ရှိ Transformer ။ တူရိယာတိုင်းတာခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်နှင့်အတူအသုံးပြုမှုနှင့်အကာအကွယ် relays များဖြစ်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အရှင် switchgear panel ကို၏လိုအပ်သော width ကိုလျှော့ချ, side-by-side installed နှစ်ခုလက်ရှိထရန်စဖော်မာများအကြားတစ်ဦးတိုတောင်းအကွာအဝေး "ဟုဦး-shaped ထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း။
ဒါက Two-core ကိုလက်ရှိ Transformer 20 ~ 24 ကေဗွီပါဝါစနစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အကာအကွယ် relays များနှင့်အတူ, တူရိယာတိုင်းတာခြင်းသို့မဟုတ် monitoring နှင့် တွဲဖက်. သုံးရပါ။ Araldite နှင့်အတူကာကွယ်ပေးနိုင်® epoxy, ဒီမိုးလုံလေလုံ-ကိုသုံးပါကလက်ရှိ Transformer မူလတန်းဆိပ်ကမ်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများအကြားအကွာအဝေးကိုဖန်တီးပေးရာတစ်ဦး "ဟုဦး-shaped ထိပ်တန်း" နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကဒီဇိုင်းလျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးပွါးနှင့်အရှင် switchgear panel ကို၏လိုအပ်သော width ကိုလျှော့ချ, side-by-side installed ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုလက်ရှိထရန်စဖော်မာအကြားလိုအပ်သောအကွာအဝေး shortens ။
မိုးလုံလေလုံ application များအတွက်
စံချိန်စံညွှန်းများ: IEC သို့မဟုတ်ကို IEEE
System ကိုဗို့အား: ≦ 24kV
AC / BIL: 50/125 ကေဗွီ
အကျိုးကျေးဇူးများ: တိုးမြှင့်လျှပ်စစ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု; အဆိုပါ switchgear panel ကိုရဲ့ width ကိုလျှော့ချ
(ညစ်ညမ်းမှုနေရာများအတွက်) 20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer
20 ~ 24kV ပါဝါစနစ် 2-core ကိုလက်ရှိ Transformer ။ တူရိယာတိုင်းတာခြင်းသို့မဟုတ် monitoring နှင့် တွဲဖက်. သုံးဆောင်ခြင်းနှင့်အကာအကွယ် relays များနှင့်အတူ။ Epoxy သွန်း။ သာ. ကြီးမြတ် creepage ရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ညစ်ညမ်းဒေသများအတွက်သင့်လျော်သည်။
မိုးလုံလေလုံလျှောက်လွှာများအတွက် 20kV Epoxy-သို့ကာစ်လက်ရှိ Transformers
စွမ်းအင်မီတာသို့မဟုတ်အကာအကွယ် relays များနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုမှုသည်။ single-core, 2-Core, နှင့် 3-Core မော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်။ Araldite® epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အတူကာကွယ်ပေးနိုင်။ စိတ်တိုင်းကျလုပ်အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။
လက်ရှိ-Transformer ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် Overvoltage ကာကွယ်ပေးသူ
အာဏာစနစ်အားစစ်ဆင်ရေး၌တည်ရှိ၏သောအခါ, လက်ရှိ Transformer (s) ၏အလယ်တန်းတစ်ပွင့်လင်းတိုက်နယ်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ပွင့်လင်း circuit ကိုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောယာယီဗို့အားအလှည့်အတွက်အလယ်တန်းမှာလက်ရှိထရန်စဖော်မာနှင့်တူရိယာကိုပျက်စီးစေနိုင်သော, သွေးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုခြိမ်းခြောက်လောကအတွက်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်အလယ်တန်း overvoltage ကာကွယ်အလယ်တန်းယာယီဗို့အားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိုကဲ့သို့သောမတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်း CT ။
20kV နှစ်ဦး-Core လက်ရှိ Transformer ( "ဦး-ပုံသွင်းထိပ်တန်း" ဒီဇိုင်း) - မော်ဒယ်: EWF-20DI
သင်္ဘော MV လက်ရှိ Transformers